176 oo ka qelin jebiyay Kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir | Dayniile.com
176 oo ka qelin jebiyay Kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir
Oct. 27 WARKA MAANTA Comments Off on 176 oo ka qelin jebiyay Kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir
Ardaydii ugu badneyd abid oo tiradoodu gaareyso 176 dhaqtar ayaa ka qelin jebisay kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir, iyadoo xaflad arintaas la xiriirta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Xafladan oo aheyd mid ardayda qelin jebisay ay ku difaacanayeen buugga qelin jebinta ayaa waxay ku soo bandhigeen cilmi baarisyo dhowr bilood socday oo ay ka sameeyeen xaaladaha dhinaca Caafimaadka ee ka jira qaar ka mid ah isbitaalada Magaalada Muqdisho, xeryaha Barakacayaasha iyo xaafadaha qaarkood.
Waxaa munaasabadan ka qeyb galay Masuuliyiin iyo macalimiin ka tirsan Jaamacadda Banaadir, ardayda difaacaneysay buugga qelin jebinta, aqoonyahano, waalidiin iyo marti sharaf kale.
Hormuudka kuliyadda caafimaadka Jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo munaasabadaas ka hadlay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ardaydan qelin jebisay ay wixii maanta ka dambeeya yihiin dhaqaatiir wax qali kara, daweyna kara, isagoo xusay inay muujiyeen dadaal badan oo waqti dheer qaatay, ayna la mid yihiin hadda ka dib dhaqaatiirta ka baxday Jaamacadaha caalamka maadaama buu yiri ay heystaan shahaado caalamka laga aqoonsan yahay oo ay ku howlgeli karaan kuna doonan karaan waxbarasho kale.
“Anigoo ku hadlaya magaca Maamulka, Macalimiinta hormuudyada iyo mu’asasada Jaamacada Banaadir waxaan ku faraxsanahay inaan si rasmi ah ugu dhowaaqo in 176 dhaqtar ay ka qelin jebiyeen kuliyadda Caafimaadka ayna wixii hadda ka bilowda yihiin dhaqaatiir” Dr. Biday oo halkaas ka tiriyey magacyada 20-ka arday oo galay kaalimaha ugu horeeya Wuxuuna xusay inuu kaalinta koowaad ku guuleystay arday magaciisa la yiraahdo Dr. C/llaahi Yuusuf Maxamed Cumar, halka kaalimaha labaad iyo sadexaad ay kala galeen Drs. Ifraax C/Nuur iyo Dr. Maxamed Siyaad Xasan.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ka tirsan aasaasayaasha iyo Macalimiinta Jaamacada Banaadir ayaa isna kulankaas ka sheegay in ardayda ka qelin jebisay kuliyada Caafimaadka Jaamacada Banaadir ay yihiin kuwa ugu nasiibka badan maadaama kuliyadaas ay ku kulmeen macalimiintii ugu badneyd ee ka soo baxay Jaamacaddii hore ee Ummadda.
Dr. Maxamed Yuusuf ah oo gudoomiyaha Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahna agaasimaha Isbitaalka Madiina ayaa isna hambalyada ka sokow ardayda qeylin jebisay ku wargeliyey in wixii hadda ka dambeeya ay si buuxda xubno uga yihiin Ururka dhaqaatiirta, ayna ogaadaan iney yihiin masuuliyiin qeyb ka ah horumarinta Caafimaadka bulshada.
Guddoomiyaha Jaamacadda Banaadir Dr. C/risaaq Axmed Dalmar oo isna munaasabadan ka hadlay ayaa u hambalyeeyey ardayda qelin jebisay, uuna farxada la wadaagayo wuxuuna sheegay in ardaydan ay yihiin kuwii ugu badnaa ee mar kaliya ka qelin jebiya kuliyadda Caafimaadka mudadii 15-ka sano aheyd ee ay jirtay. Wuxuu sheegay in Jaamacadda Banaadir ay ka qalinjebiyeen 726 takhtar oo ka hawlgala dhammaan gobollada Soomaaliya, taasoo uu xusay iney tahay guul u soo hoyatay Jaamacadda iyo calaamad muujineysa kaalinta hore ee ay kaga jirto horumarinta Caafimaadka dalka.
“Waa maalin farxadeed maanta maadaama ay jaamacada Banaadir ka qelin jebiyeen dufcadii 10aad ee soo dhameysata kuliyadda dhaqtarnimada ka dib lix sano oo dedaal dheer iyo Juhdi badan la soo waday wixii maanta ka dambeeya waxaad tihiin dhaqaatiir, masuuliyad buuxda ayaana idinka saaran Caafimaadka bulshadiina Soomaaliyeed” ayuu yiri Dr. Dalmar.
Waxa uu sheegay in Jaamacada Banaadir la aasaasay sanadkii 2002 xilli aysan jirin wax dhaqaatiir Soomaliyeed oo muddo 12 sano ah ka soo baxay jaamacado, burburka dalka ka jiray awgeed, wuxuuna xusay in jaamacadu ay guul u tahay in 15 sano ka dib ay soo saartay boqolaal dhaqtar taasoo uu sheegay in jaamacada iyo dhaqaatirta aasaaasayba ay baal dahab ah kaga galeen taariikhda, isagoo ugu dambeyna hadalo dardaaran ah u jeediyey dhaqaatiirta qelin jebisay.
Guddoomiyaha Muasasada Jaamacadda Banaadir Dr. C/llaahi Shiikh Xuseen (Bushkuleeti) oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in jaamacadda Banaadir ay buuxisay kaalintii Jaamacadda Umadda ee xiligii beri-samaadkii dalka ka jirtay, ayna soo saartay dhaqaatiirtii ugu badneyd Somalia.
Dr. Bushkuleeti oo ardayda qelin jebisay u sheegay in waxbarashadii rasmiga aheyd ay maanta u bilabatay aysan maankooda gelinin in waxbarashadii ay halkaas ku dhamaatay.
Maamulka iyo Macalimiinta Jaamacada Banaadir ayaa intii ay socotay xafladaas ka tacsiyadeeyey geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Marxuumad Drs. Maryan C/llaahi Maxamed oo ka mid aheyd dhaqaatiirka qelin jebineysay sanadkan balse nasiibku u saamixi waayey, taasoo ka mid aheyd dadkii ku naf waayey musiibadii 14-kii bishan ka dhacday Isgoyska Zoope, iyadoo ka qeyb galayaasha munaasabadan ay muujiyeen murugo iyo tiiraanyo ay la qeyb qeybsanayaan qoyskeeda, waxayna Alle uga baryeen inuu janadii ka waraabiyo eheladii ay ka baxdayna samir iyo Iimaan ka siiyo.
Marxuumad Drs. Maryan C/llaahi Maxamed ayaa 177 ku noqon laheyd dhaqaatiirta sanadkan ka qelin jebiyey Jaamacada Banaadir ka dib lix sanadood oo ay soo qaateen waxbarasho adag, waxaana marxuumadu ay kaalinta 12aad ka gashay 20-ka arday ee ugu horeeya 177-da dhaqtar ee qelin jebiyey.
Sidoo kale, Maamulka iyo Mu’asasada Jaamacada Banaadir ayaa Munaasabadaas ka shaaciyey iney go’aansadeen wixii hadda ka dambeeya inay si lacag la’aan ah wax uga barato Jaamacada Cabiir Abuukar Maxamed Daahiye oo ka tirsan ardayda Kuliyadda Caafimaadka taasoo labadeeda waalid ku weysay Musiibadii Zoope, waxaana munaasabadaas ay ku dhamaatay jawi aad u wanaagsan.
Israsaaseyn Dhimasho Iyo Dhaawac Sababtay oo ka dhacday M-Muqdisho →